မော်ဒန် အိပ်ယာဝင်ပုံပြင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မော်ဒန် အိပ်ယာဝင်ပုံပြင်
Posted by မောင်ဖိုးတီ on Jun 4, 2011 in Copy/Paste, Creative Writing, Short Story |9comments
ဘာရာနသီ လို.ခေါ်တဲ. တိုင်းပြည်တပြည် မှာ ဘာမှန်းမသိတဲ.
မင်းကြီးအုပ်ချုပ်နေတာပေါ. သူ.မှာ သမီးတော်တပါးရှိသတဲ.
အဲ.ဒီတိုင်းပြည်မှာ ဘာမင်းကြီးအုပ်ချုပ်လာလိုက်တာ ဘာလိုလိုနဲ.
ဒီတော. ဘာမင်းကြီးလဲ တနေ.တနေ. အရွယ်ရောက်လာတဲ. သမီးလေးကိုကြည်.ပြီး
အော် ငါ.သမီးလေးတောင် အရွယ်ရောက်လာပါပေါ.လား သမီးလေး အရွယ်ရောက်လာရင် ဘာကောင်နဲ.များချစ်ကြိုက်မလဲပေါ.
သူ.မှာလဲ တစ်နေ.တစ်နေ. သမီးတော်လေး ဘာကောင်နဲ.ကြိုက်လို. သူ.ရဲ.ထီးနန်းကို ဘာကောင်ကိုလွှဲပေးရမလဲ ဆိုပြီး ဆိုးရိမ်နေတာပေါ.
ဒီလိုနဲ. တစ်နေ.ကျတော. ဘုရင်ကြီးဟာ စိတ်ပြေလက်ပျောက် တောကစားထွက်ကြတယ်တဲ.
အဲ.ဒီလိုတောကစားထွက်ကြတော. တောထဲလဲရောက်ရော တောကောင်ပစ်ဖို. ဘုရင်ကြိးနဲ. သူ.ရဲ.ငယ်သားတွေက လိုက်ရှာကြတာပေါ.ကွယ်
အဲ.ဒီအချိန်မှာပဲ သူတို.ရဲ.အနီးအနားက ချုံပုတ်တစ်ခုကလှုပ်သွားတာကိုတွေ.လိုက်သတဲ. အဲ.ဒါနဲ.ဘုရင်ကြီးလဲ သူ.ရဲ.လက်စွဲတော် လေးကိုတင်ပြီး သားကောင်ပဲဆိုပြီး ပစ်ထဲ.လိုက်တာပေါ.
အဲ.လိုပစ်လိုက်တော. ချုံပုတ်ထဲက ဘာမှန်းမသိတဲ.အကောင်ကိုတည်.တည်.မှန်တာပေါ.ကွယ် ဘုရင်ကြီးကလဲ လက်ဖြောင်.တာ ဂျူမုံတောင်အရှုံးပေးရလောက်တယ်လေ ဒါပေမယ်.အသက်ပြင်းလှတဲ. ဘာမှန်းမသိတဲ.အကောင်က ကမူးရှုးထိုးနဲ.ထပြေးတာပေါ. ဘုရင်ကြီးနဲ.ငယ်သားတွေကလဲ နောက်ကနေလိုက်ကြတာပေါ.
အဲ.သလိုနောက်ကလိုက်ရင်းတဖြေးဖြေးနဲ.တောကနက်လာတာပေါ. အဲ.ဒီတောနက်ကြီးရဲ. အလယ်မှာတော. ကွင်းပြင်ပြောင်ပြောင်ကြီးရှိနေတယ်တဲ. အဲ.ဒီကွင်းပြင်ကြီးရဲ.အလယ်မှာ သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ကလဲပေါက်နေတာပေါ.
အဲ.ဒါနဲ.ဘုရင်ကြီးလဲသိချင်တာနဲ. သူ.ရဲ.ငယ်သားတစ်ယောက်ကိုခေါ် ပြီး ဘာပင်လဲလို.မေးတာပေါ. ငယ်သားလေးကလည်း အဲ.ဒါဘာပင်မှန်းသူလဲသေချာမသိဘူးလို.ပြန်ဖြေသတဲ. ဒါနဲ.ဘုရင်ကြီးလဲစူးစမ်းချင်တာနဲ. အပင်ကြီးနားသွားကြည်.လိုက်တော. အပင်ကြီးရဲ.ဟိုးထိပ်ဖျားမှာ ဘာမှန်းမသိတဲ. အသီးကြီးတစ်လုံး မှည်.နေတာတွေ.တာပေါ.ကွယ်
အသီးကြီးကလဲ မှည်.၀င်းနေလိုက်တာ ခူးချင်စရာကြီးကိုဖြစ်လို.ပေါ.
ပညာရှိအမတ်ကြီးတွေကိုလဲခေါ်ပြီး ဘာအသီးလဲသိချင်လှတာကြောင်.မေးတော. ပညာရှိအမတ်ကြီးတွေလဲ ဘယ်သူမှမဖြေနိုင်ဘူးတဲ.
ဒါနဲ.ဘုရင်ကြီးလဲ အထဲမှာဘာများပါမလဲ ပေါ. စားကောစားကောင်းမလားသိချင်လှတာကြောင်. သူကိုယ်တိုင်ပဲ သူ.ရဲ. ဆောင်ဒါးကြီးနဲ. ခွဲချလိုက်တဲ.အခါမှာတော.
ဘုရင်ကြီးသာမကပဲ မူးမတ်တွေကော သမီးတော်လေးပါ အံ.ဩ ကုန်တာပေါ.
ဘာဖြစ်လို.လဲ ဆိုတော. သူတို.တအံ.တဩနဲ.ခွဲကြည်.လိုက်တော. အထဲမှာပါတာ
တွေ ကလေ ဘာမှမပါလို.ပဲတဲ…..
မောင်လေးညီမလေးတို.လဲ အခွံပဲရှိပြီး အထဲမှာဘာမှမရှိတဲ.သူတွေ မဖြစ်ကြဖို. ပြောချင်ပါတယ်ကွယ်
ရွာထဲက အစ်မများအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်
အမတို့ ငယ်ငယ်တုန်းက တော့ဒီပုံပြင်နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်လေးတွေကို နားထောင်ဖူးတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက အကြောင်းလေးကိုတောင် ပြန်သတိရမိတယ်
ပုံပြောသူတွေများလာပြီ။ ဂေဇက် မူကြိုဖွင့်လို့ရပြီ။
ဒီစာလေး ကို ဖတ်ရတော့ မြင်ဖူးသလို ကြားဖူးသလို ရှိတာမို့ 
ဆရာဂျက် ကွမ်းခြံကုန်းရဲ့ မဂ္ဂဇင်း၊ဂျာနယ် များ မှာ ရေးသားခဲ့တဲ့ သရော်စာ စုများကို စုပေါင်းပြီး ပြန်ထုတ်ထားတဲ့ စာအုပ်ကို ပြန်ဖတ်ကြည့်မိပါတယ် ။ ဆရာဂျက် က ဘယ်လို ရေးထားသလဲ ဆို ရင် “ဗာရာဏသီ ပြည်မှာ ဘာမင်းကြီး စိုးစံတုန်း က ဘာသီးကြီးမှန်းမသိ ရေထဲ မျော လာရာ ဘာဓါးကြီး နဲ့ ခွဲလိုက်တော့ အထဲ မှာ ဘာမှ မရှိ ဟူ ” ဆိုတဲ့ သရော်စာလေး နဲ့ များ တူနေသလား လို့ ။ အဲဒီစာ ကို ပဲ ကိုဖိုးတွမ်တီး က များ အကျယ်ပြန်ရေးထားတာလား ( သို့ မဟုတ် ) ဆရာဂျက် ကွမ်းခြံကုန်း က ပဲ ကိုဖိုးတွမ်တီး ရဲ့ အခုစာကို ဖတ်ပြီးတော့ များ အိုင်ဒီယာ ထုတ်ထားတာလား ဆိုတာ ဝေခွဲရန် ခက်ခဲနေပါကြောင်း ။
ဒါဘယ်သူ့မူပိုင်ပုံပြင်မှမဟုတ်ပါ။ ကျွန်မတို့ ငယ်ငယ်ထဲက ဟာသပြောနေကြတာပါ။ ဒါလေးကို ဖိုးတွမ်တိ က ခေတ်နဲ့ အညီ ဂျူမုံတွေ ထည့်ပြီးတန်ဆာဆင်ထားတာ ဆိုတော့ မူပိုင်ကိစ္စ အငြင်းမပွားသင့်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ပါ ဖတ်ဖူးတာ ရှိလို့ စောဒက တက်မိတာပါ မှားတာရှိရင် တောင်းပန်ပါ၏